Operation Prison Break sy mandika ny lalàny ny FFKM raha... | Hevitra MPANOHARIANA
Arahabaina ny namana trartry ny taona e ! Dia mahafinaritra fa niova akanjo koa ny blaogy e, misy ho tahafina ihany kay i Kdaombaramita ! Inona moa ry Jent ilay post-nao misy soratra kely ery ambany manoro ilay sita mampanao traduction raha tsy mahadisoa ?
Nampidirin'i Kdaombaramita @ 06:53, 2009-01-06 [Valio]
Nampidirin'i Kdaombaramita @ 06:54, 2009-01-06 [Valio]
Efa nahiko daholo izao zava-mitranga izao.
Izaho manokana dia miaiky fa jadona ny fitondran'ny filoha ankehitriny, ary voafetra ny demokrasiany. Fantatsika anefa fa ny fampiharana ny demokrasia dia mila hery sy aro riaka. "Hery" afaka mandray andraikitra, ary "aro riaka" afaka manenjika izay olona miteniteny foana, na miteny ratsy olona iray amin'ny tsy antony (izany moa dia tsy demokrasia). Raha vantanina ny resaka dia ny "lalàna", ny "fitsaràna", ny pôlisy, ny zandary ary ny miaramila ireo hery sy aro riaka ireo. Raha tsy matanjaka ireo dia tsy ho voaaro ny demôkrasia, ary mila asiana aro riaka. Iarahantsika mahalala anefa ny tsy fahatomombanan'ireo "hery" sy "aro riaka"ntsika malagasy : ny fonja mora vakiana, ny raharaha eny @ fitsarana toa misy tsy mazava hatrany, ny bianco sadasada, sns
Koa ny tsirairay no mandinika.
Raha ny saina feno fitiavan-tanindrazana no entina itsarana ireo dia ny "hikatsaka" ny demokrasia hatrany no ao an-tsaina. Aza mini-tsy mijery ny eo ambany maso ihany anefa fa eritrereto hoe : mety ho tanteraka 100% eto Madagasikara ve izany raha mbola izaho sy ianao no fônksiônera (mpiambina fonja, pôlisy, zandary, miaramila), raha mbola mitohy ny tsy fampiharana ny lalàana manakery.
Ampatsiahiviko eto fa ny demokrasia tsy voafehy dia mitarika amin'ny ady an-trano : samy afaka milaza ny heviny izay te hilaza, hitombo ny "intox", ary farany dia hiady ny merina sy ny cotiers. Ho feno rà mandriaka eto Madagasikara. Mivantambantana ilay izy, anefa ataoko fa azonareo an-tsaina tsara izany satria efa kely foana no tsy hitrangan'izany isaky ny misy korontana. Tohizako hatrany : hody any @ toerany ny isam-poko, ary dia hikatso ny asam-panjakana rehetra (paositra, ministera,...), eny fa na dia ny varotra. Hisy ny krizy.
Afaka ataontsika koa anefa ny manohitra izany "jadon"ny fitondrana ankehitriny izany" : afaka mitokona isika, ary manongana an'i ravalomanana. Alaivo sary an-tsaina anefa ny zavatra rehetra mety hitranga :
Vao volana janoary dia : fonja telo vaky. Voalohany dia natao hanakorotanam-bahoaka io. Faharoa dia hery ho an'ny rangory fototry ny afo io. Ny gadra, hatraiza hatraiza, dia olona mangetahefa fahafahana, ary maro no vonona hanao izay rehetra ampanaovina azy raha afahana ao am-pigadràny.
- hizara roa ny kristiana : ny miaraka amin'ny fitondrana , sy ny mpanohitra. Ao ny hilaza hoe foanana ny fivavahana @ alahady fa hiara-mivavaka @ vahoakan'i tana. Lesoka sy zava-dratsy amintsika malagasy ity manafangaro fivavahana sy raharaha pôlitika ity. Mitady tohana @ fiangonana daholo izay maniry ho filoha. Mandaitra aloha io ka dia ampiharin'ny olona. Nefa ... tokony hararaotiny ve izany ?
Ity fanasan'ny kaominina ity dia fitsapan-kery ataon'ny mpanohitra. Tiany ho fantatra hoe betsaka ve ny mpomba azy?
Farany : amin'ity taona 2009 ity dia miha mahazo hery ireo rehetra mpanohitra. Efa tsinjotsinjotsika daholo izany. Koany fanontanana diany hoe : misy hahavita hanome antsika demokrasia tanteraka ve ireo? Ary iza no sahy manome toky fa hilamina isika malagasy raha atomboka ny filaharana an-dalam-be hanalàna an'i ravalomanana ?
Fanontaniana apetrako amin'i jentilisa (izay fantatro fa marina daholo ny zavatra tanterinao aminay eto, ary amin-kitsim-po no itanteranao azy) : fotoana tsara anoherana ny fitondrana ve izao ?
Nampidirin'i Korio @ 23:13, 2009-01-06 [Valio]
Ataoko fa ny fotoana rehetra dia azo hanoherana ny mpitondra foana! fa ny mahavariana dia hoe: ny fanoherana ve tsy mahalala afa-tsy fanonganana izany?
araka ny hanaovana ny tsy ara-dalàna no hahapotika ny demaokrasia tadiavina araka ny fijeriko
Nampidirin'i jentilisa @ 14:46, 2009-01-07 [Valio]
Marina tokoa ny anao : tsy midika ho "fanonganana" ny "fanoherana". Raha hilatsaka an-dalam-be anefa isika mikasa hanohitra fotsiny, à qui profite le crime :) (tsy "crime " moa zany fa "hetsika" e :)). Iza no tonga hanampy isa anao eny @ 13mai, ary ho voafehinao ve ny kabary sy fanentanana ataony eny ?
Momba ilay hoe "araka ny hanaovana ny tsy ara-dalàna no hahapotika ny demaokrasia tadiavina". Tsy laviko mihitsy izany. Ary apetrako ny safidy manao hoe : iza no tsara ..."demokrasia potika", sa "fikorontam-bahoaka". Moa tsy ho sarotra ny hampijoro izany demokrasia izany raha misy ady an-trano eto Madagasikara?
Azo atao kabary tsy valiana ny resako raha mahakamo e!
Nampidirin'i Korio @ 19:16, 2009-01-07 [Valio]
Ny miresaka mihitsy aza no tadiaviko koa!
Nampidirin'i jentilisa @ 19:29, 2009-01-07 [Valio]
Nampidirin'i jentilisa @ 19:30, 2009-01-07 [Valio]